Mahazo vahana ny « traumatisme sonore » : olona enina amin’ny 10 manana olana amin’ny fahenoana | NewsMada
Mahazo vahana ny « traumatisme sonore » : olona enina amin’ny 10 manana olana amin’ny fahenoana
Par Taratra sur 21/03/2016
« Olona enina amin’ny 10 manana olana amin’ny fahenoana avokoa raha ny marary tonga manatona ny toeram-pandraisana ny aretin’ny fahenoana eny amin’ny CHU Andohatapenaka no jerena », hoy ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny ORL ao aminy, Razafindrakoto Rex, ny faran’ny herinandro teo. Ho an’ny zaza manokana, zaza iray amin’ny roa tratran’ny otite sero muqueuse avokoa mialoha ny faha-5 taona. Betsaka ny trangan’aretina mahazo ny sofina fa misongadina ny tain-tsofina, ny otite eo amin’ny zaza, ny rano mihandrona amin’ny sofina, indraindray misy lavaka koa ao anaty sofina, tsy fahenoana ho an’ny olon-dehibe… Azo sitranina avokoa ny aretin’ny sofina fa tsy mbola manao fandidiana kosa ny CHU Andohatapenaka hatramin’izao, efa arifomba ny fitaovam-pitiliana samihafa misy.
Fomba iray hitandroana ny fahasalaman’ny sofina ny tsy fisokirana azy hodiovina diso tafahoatra. Manadio tena ny sofina. Eo amin’ny zaza voan’ny sery, matetika lasa any amin’ny sofina ny mikraoba ka tokony hotsaboina raha vao miandoha ny sery tsy hiitatra amin’ny taova hafa, hoy ny fanazavana azo.
20%-n’ny marary tonga, vokatry ny feo mafy avokoa
Anisan’ny olana iray lehibe miseho amin’izao fotoana izao koa ny « traumatisme sonore » avy amin’ny fihainoana feo mafy sy maharitra loatra, araka ny voalazan’ny dokotera misahana ny ORL ao amin’ny CHU Andohatapenaka, Razafimandimby Christian. 20% -n’ny olona tonga mitsabo ny sofina, vokatry ny « choc sonore » avokoa. 35 decibel ny haavon’ny feo zakan’ny sofina ary tsy tokony hihoatra ny telo minitra ny faharetany. Rehefa mampiasa fitaovam-pihainoana apetraka amin’ny sofina anefa, mivantana any amin’ny ampongantsofina avy hatrany ny feo mafy. Adiny enina aty aorian’ny traumatisme nahazo ny sofina fara-fahatarany, no vonjena ilay sela satria marefo. Ny selan’ny sofina rahateo rehefa maty, sady tsy azo soloina no tsy maniry intsony fa simba tanteraka. Fisehoan’ny traumatisme sonore, indraindray maneno ny sofina na koa fanina ilay olona tratrany.
« Rehefa mihaino hira na feo, tsy tokony haharitra mihoatra ny telo minitra ny faharetany hitandroana ny fahasalaman’ny sofina », hoy ny mpitsabo manokana.
Naompana amin’ny zaza ny fanamarihana
Nomarihina ny faran’ny herinandro teo ny Andro maneran-tany momba ny fahenoana izay naompana amin’ny zaza satria misy fiantraikany amin’ny fianarany sy ny fiainana iray manontolo ny tsy fahenoany. Tokony hoentina eny amin’ny tobim-pahasalamana avy hatrany raha vantany vao ahitana olana eo amin’ny sofin’ny zaza tsy ho tara ny fandraisana an-tanana. Nisy fizahana sofina maimaimpoana nandritra ny tontolo andro teny Andohatapenaka.